musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Mushonga mutsva wegomarara weZantrene unodzivirira moyo kubva murufu
Australia Kuputsa Nhau • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Health News
Kambani yeAustralia biotech uye precision oncology, Race Oncology, yazivisa nezve tsvakiridzo yepakutanga yakawana mushonga wayo Zantrene® inokwanisa kudzivirira maseru etsindanyama dzemoyo kubva parufu uku ichivandudza kuuraya kwemasero egomarara rezamu kana ikashandiswa pamwe chete neanthracycline, doxorubicin.
Mujaho weOncology's drug Zantrene inoratidzwa kuchengetedza masero emwoyo wemunhu kubva ku anthracycline-induced chemotherapy kufa. Anthracycline's ndiyo inonyanya kushandiswa uye inoshanda yekurwisa cancer, asi inogona kukonzera kukuvara kwakanyanya kwemoyo.
Tsvagiridzo yepamberi yakaratidzawo kugona kweZantrene kuyananisa neanthracyclines iripo kuuraya zvirinani maseru egomarara rezamu.
Nekuda kwekukosha kwekuwanikwa, Zantrene ichakurumidza kurondwa kukiriniki ine chirongwa chePhase 2b chakarongerwa 2022 muvarwere vegomarara rezamu vari panjodzi huru yekukuvadzwa kwemoyo kunokonzerwa neanthracycline.
Inopa mukana wezvekureruka kwekiriniki uye zvekutengesa kudzoka kubva kutsva Zantrene/anthracycline maumbirwo nemisanganiswa.
Aka ndekekutanga kuti mushonga uratidze kugona kwese kunanga gomarara uye kudzivirira moyo kubva mukukuvara kweanthracycline. Kuwanikwa uku kunopa tariro nyowani kumamiriyoni evarwere vegomarara pasi rese vanorapwa chemotherapy neanthracyclines uye vari panjodzi yekukuvadzwa kwakanyanya uye zvachose kumoyo yavo.
Anthracyclines anozivikanwa zvakanyanya seanonyanya kushanda ekurapa cancer akambogadzirwa uye anoshandiswa mumhando dzakawanda dzegomarara kupfuura chero imwe kirasi yeanorwisa cancer agent., kusanganisira leukemias, lymphomas, neuroblastoma, itsvo, chiropa, dumbu, uterine, thyroid, ovarian, sarcoma, dundira, kenza yemapapu uye yemazamu. Zvisinei, kutya pamusoro pemigumisiro inokuvadza yeanthracyclines pamwoyo yakatungamirira kune vakawanda vanoongorora oncologist kuderedza kushandiswa kwavo kwemishonga iyi inoshanda zvakanyanya. Kuwanikwa kweRace kune mukana wekuvandudza kushandiswa kweanthracyclines nekubvumira oncologists kushandisa mishonga ine simba iyi kune yavo yakazara inorwisa kenza pasina kutya kukuvara zvachose kumoyo.
The Zantrene® Chirongwa chetsvakiridzo chekuchengetedza moyo chiri kutungamirwa nevaongorori vane mukurumbira ve cardiotoxicity, Vanobatana Mapurofesa Aaron Sverdlov naDoan Ngo, vachibatsirana nekenza sainzi Associate Purofesa Nikki Verrills, paYunivhesiti yeNewcastle.
Mumwe Purofesa Aaron Sverdlov akati: "Parizvino, iyo pfungwa yekugona kurapwa kwegomarara iyo isiri chete isiri-cardiotoxic asi, kutaura zvazviri, cardio-inodzivirira haina kuongororwa kana kuvaraidzwa, zvakanyanya nekuda kwe 'chirwere-chaiyo nzira muhutano. Zvatinowana zvinoratidza kuti Zantrene, mushonga unoshanda wekurwisa gomarara, unogona panguva imwe chete kupa dziviriro kubva kune chepfu pamwoyo kubva kune imwe yeanonyanya kushandiswa chemotherapy agents, doxorubicin. Uhwu ndihwo humbowo hwekutanga hwerudzi rwayo kuratidza kuti kune marapirwo anonangana negomarara uye anodzivirira moyo! Izvi zvine mukana wekuvandudza hutano kune vasingaverengeki varwere vegomarara nevapukunyuki nekuvandudza kurapwa kwavo kenza nekudzivirira kukura kwechirwere chemoyo. "
Kunyangwe ichi chiri chitsva chinonakidza kuwanikwa, Zantrene® (bisantrene dihydrochloride) ine nhoroondo refu yekiriniki, yakagadziridzwa muma1970 senzira yakachengeteka yemoyo kune anthracyclines  isati yatenderwa muFrance muma1990s. Nepo kuchengetedzwa kwemoyo kweZantrene kwakavandudzwa kwakaratidzwa mune zvinopfuura makumi mashanu miedzo yekiriniki, , mubvunzo wekuti Zantrene inogona kubatsira kudzivirira kukanganisa kwemwoyo kunokonzerwa neanthracyclines haina kumbogadziriswa.
Vachitaura pamusoro petsvakiridzo itsva, Race's Chief Scientific Officer, Dr Daniel Tillett vakati: “Kuwana kuti Zantrene inogona kudzivirira moyo kubva kuchemotherapy ukuwo ichiuraya kenza zvirinani chinhu chinoshamisa 'chezvakanakisa zvepasirese' mhedzisiro. Sezvo anthracyclines inoshandiswa mumamiriyoni evarwere vekenza gore rega rega, zvakaoma kuwedzeredza kugona kwekiriniki nekutengeserana kwekubudirira uku!
Mune iyi preclinical modhi, Zantrene inochengetedza maseru emhasuru dzemoyo kubva mukukuvadzwa nedoxorubicin ichibatanidza neanthracyclines kuuraya zvirinani maseru egomarara rezamu.
Mujaho waendesa chikumbiro chemvumo chinobata musanganiswa weZantrene neanthracycline kuitira kuchengetedza mwoyo yevarwere. Iyi patent (kana yakapihwa) yaizopa dziviriro yemusanganiswa wemushonga uye kushandiswa kwayo kwekiriniki kuburikidza ne2041.
Iyi nyowani yekudzivirira moyo inowanikwa ichafambiswa nekukurumidza kukiriniki. Nhoroondo yekiriniki yakakura yeZantrene inobvumira musanganiswa uyu kuti ukurumidze kufambira mberi pakiriniki.
Hurukuro dzepamusoro dziri kuenderera mberi nevarapi muAustralia kuti vaite chirongwa chePase 2b chekiriniki muvarwere vekenza yemazamu vari panjodzi huru yekukuvara kwemoyo kunokonzerwa neanthracycline.
Kuwanikwa uku kunovhura mikana mitsva yemusika yeZantrene yezvakafanana zvekiriniki uye zvekutengesa kune zvakawanikwa kare kuti Zantrene inhibitor ine simba yeFTO.
Zvidzidzo zvemhuka zvichaitwa muQ4 CY2021 / Q1CY2022.
Yekuwedzera preclinical zvidzidzo zvekuongorora kana Zantrene ichigona kudzivirira moyo kubva mukukuvadzwa nemimwe mishonga yechemotherapeutic inozivikanwa zvakare kukonzera cardio-kukuvara.
Zvimwe zvidzidzo zvekuona mamolecular maitiro eZantrene's cardio-protective chiitiko. Izvi zvinogona kubvumira kuzivikanwa kwemamwe mabasa ekudzivirira eZantrene.
Kuvandudzwa kwezvitsva uye zvakakwenenzverwa zvemusanganiswa wemishonga zvakagadziridzwa kukosha kwekiriniki uye zvekutengesa.
Kutanga kweChikamu 2b kenza yemazamu kiriniki kuyedzwa muna 2022.